Famandrihana sary b Galeriana ROYI ART
Blame Sublimation MDF Photo Frame
Zavakanto na kanto Bespoke amin'ny marika Fivoriam-bidy
tonga lafatra amin'ny mariazy, fitsingerenan'ny andro nahaterahana, fitsingerenan'ny taona ary fotoana manokana!
C avereno ny sarinao manokana amin'ny asa-tanana manokana
Manome ny serivisy bespoke izahay hamolavola sy hanapaka ny endrika MDF mifanaraka amin'ny filanao manokana. Ny habe sy endriny natao an'ny fisie MDF tsy misy dia azo atao, ankoatra izany, afaka manao UV na sublimation hafanana mandefa ny sarinao mivantana ianao! ROYI ART manohana anao hamorona ny kanto kanto amin'ny asa-tanana manokana!
Taratasy taratasy: Ho an'ny litera efa namboarina dia ny Fitiavana, Fianakaviana, Tanamasoandro, sakaiza, Arahabaina sy ny sisa! Afaka manapa-kevitra manoloana ny haben'ny teo aloha sy ny fomba ary ny haben'ny endrika. Asehoy ny fanirianao tsara indrindra amin'ny alàlan'ny famolavolana natao manokana!
Frame misy modely amin'ny loha: azonao atao ny manapa-kevitra hoe iza no modely amin'ilay izy, afaka ny masoandro, ny volana, ny voninkazo, ny biby na izay ao an-tsainao! Ataovy amin'ny fanahinao ny modely mifanentana amin'ny sary!
Miankina amin'ny firafitra: Raha tianao ny fomba tsotra tsy misy endrika manaingo eo amin'ny lohan'ny rindran-tsary, maninona raha atao ny manamboatra modely voatokana ho an'ny rindrina, asehoy anay fotsiny izay tianao ho toetoetra ary hanampy anao hamadika izany izahay. ho zava-misy!
Cartame Frame: Io no fomba tsara indrindra hanampiana ny ankizy hamonjy ny fahazazany tsy hay hadinoina! Mety ho fomba mahafinaritra izany an-tsoratra ny fomba fitomboan'ireo zanakao isan-dingana ary malaza amin'ny mpianatra voalohany! Fampisehoana sary mihetsika mahafinaritra amin'ny alàlan'ny fomba mahafinaritra! Azonao atao ny manapa-kevitra hoe iza ny sariitatra sary hiaraka amin'ilay zaza hitombo isa-dingana!
Atombohy aminay ny tetik'asa
Izahay dia mamolavola sy manamboatra endrika MDF tsy misy fangarony amin'ny alàlan'ny teknolojia fampihenana ny vatan'ny MDF sy ny teknolojia CNC. Ny mari-pana amin'ny hafanana hafanana mety dia 180 ~ 200 ℃ ao amin'ny 60-80 segondra amin'ny alàlan'ny tsindry ambany. Ny tombony azo amin'ny vatantsika MDF dia miaro rano ary ahafahana mitazona fotoana maharitra.
Ahoana no hanombohana antsika? Ny dingana voalohany dia mifandray aminay ary lazao aminay izay ao an-tsainao dia hataontsika ho tena zavakanto!
Manaova pirinty ny sarinao manokana ho fanomezana manokana amin'ny alàlan'ny hifandraisana aminay!
Abstract solika hanao hoso-doko , filanjana-ponja , -tanana solika hanao hoso-doko , Contemporary Oil Painting , diloilo hanao hoso-doko amin'ny lamba , Oil Painting , ny rehetra Products